China yepamusoro mhando nylon pulley ye crane fekitori uye vanotengesa | H & F. nylon
Zvisimbiso Type:kuvhura / chisimbiso
Nzvimbo yeKutanga:Jiangsu, China
zvinhu:chrome simbi / inotakura simbi
Chinyakare pulleys anowanzo kugadzirwa nesimbi yakakandwa kana simbi yakakandwa. Kunyangwe hazvo iine hukuru-hunotakura huremu, vane hurombo hwekupfeka kuramba, uye inokuvadza tambo yesimbi. Pamusoro peyakaomesesa maitiro esimbi simbi pulleys, iyo chaiyo mutengo yakakwira kupfuura MC nylon pulleys. Iko kushandiswa kweMC nylon pulleys kwakasimba. Nyore kugadzirisa. Chero bedzi iyo fomula iri yakakodzera, pulleys ane akasiyana maitiro ekuita anogona kuitwa. Mushure mekushandisa MC nylon pulleys, hupenyu hwepulley hunowedzerwa ne4-5 nguva, uye hupenyu hwetambo tambo hunowedzerwa ne gumi. Enzanisa "simbi pulley" uye "MC nylon pulley", MC nylon Iyo pulley inogona kudzikisira huremu hweboom uye boom musoro ne70%, kuvandudza kugadzirwa kwekuita, kusimudzira basa rekusimudza uye mashandiro emuchina wese, zviri nyore zvekuchengetedza, kusunungura uye kuungana, uye pasina mafuta ekuzora. Vazhinji vanogadzira crane kunze kwenyika, senge Liebherr kuGerman uye Kato Co, Ltd. muJapan, vanga vachishandisa MC nylon pulleys kubva kuma1970.
Yakazara cylindrical roller inotakura zvakanyanya kushandiswa muMotors, Machine shaft, jenareta, Rolling Mill, Reducer, Vibration Screen uye Crane, nezvimwe.
100 Piece / Pieces pamwedzi Kukanda Cable Chete chisimudziso kuti Crane
Kurongedza uye Shipping:
1.Bhegi repurasitiki, bhokisi rimwe chete, katoni uye nhovo.
2. Industrial pasuru.
3. yemapuranga kesi, nhovo
Pashure: Nylon bhandi pulley yakaitwa muchina
Zvadaro: zvinhu zvenaironi chinotenderera aripo